Gadzira Nesimba Mazwi Akakosha eAdvertisements | Martech Zone
Svondo, Gunyana 23, 2007 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Ndichiri kuverenga Nzvimbo yaJohn Chow, Ndakanga ndakanganwa kuti ndakasaina kuAuctionAds asi handina kumboisa kodhi panzvimbo yangu. Manheru ano ini ndakawedzera iyo kodhi pane yangu imwe chete zvinyorwa pakati pezvinyorwa zvekutumira uye chikamu chekutaura. Ndiri kutarisira kuona maitiro avanoita.
AuctionAds ine yakanaka ficha kwaunogona kunyatso tsanangura mazwi akakosha aungade kugadzira kushambadzira nawo. Panzvimbo pekuona zvimwe zvakajairika zvesaiti yangu yese, ndinoisa iyo Ultimate Tag Warrior plugin kushandisa (zvakare)!
AuctionAds inoda kuti iwe ugadzirise ako makiyi mazwi ekushambadzira ane semi-colon seye delimiter. Nekuda kweizvozvo, iwe unofanirwa kugadzirisa fomati inobuda yeiyo Ultimate Tag Warrior kodhi. Ini ndakafometa yangu kuti ndinyore yekutanga tag ndozoisa semi-colon nenzvimbo pakati pezvimwe. Pamusoro pezvo, ndataura mazwi akawandisa e3 akakosha kuti aonekwe uye ndokutevera ne3 default keywords andinoziva kuti anogara achiratidza ad.
Kunanga iyo Ad kune zvirimo kunofanirwa kuguma nekusimudza mukudzvanya-kuburikidza nemitengo pakushambadzira. Ini nguva pfupi yadarika ndakaedza Google Adsense vs. Google Referrals pane imwe yenzvimbo yangu yakatarwa uye Adsense yaive ne8 nguva yekudzvanya-kuburikidza mwero. Relevance pakushambadza ndizvo zvese! Kana iwe ukasapa kushambadzira kwakakodzera, unenge uchingotsamwisa vaverengi vako kana ivo vanokura kufuratira ads. Hapana anoda izvozvo!
Imwe noti: Kana iwe uchinyatso kuyedza kodhi, haugone kudzosa chero mhedzisiro pakutanga. Ivo vanhu veAuction Ads vanoti zvinotora nguva kuvaka iwo keyword mhinduro. Handizivi kuti zvinotora nguva yakareba sei. Iwe unogona kuramba uchiwana mari yekutumira kubva kuAuction Ads interface, zvakadaro!